Eyona nto iphambili kwi-Android P Beta 2 | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Izaziso
Ngexesha lokubhiyozela i-I / O kaGoogle, inkomfa yabaphuhlisi bakaGoogle, abafana abavela kwiNtaba yokujonga basibonisile inani elikhulu lemisebenzi eziza kuza kunye nazo zonke iinkonzo ezinikezelwa ngoku njengeGmail, uGoogle Maps, uGoogle Lens, uMncedisi kaGoogle ... kunye ne-Android P.
Ngo-Matshi 7, UGoogle ukhuphe i-beta yokuqala ye-Android P, uguqulelo olulandelayo lwe-Android oluza kufika ukusuka ngoSeptemba luye kuzo zonke izixhobo ezifanelekileyo kwaye phakathi kwayo sifumana ukubekwa ngaphakathi, utshintsho kwindawo yewotshi ngasekhohlo kwesikrini ngenxa yokufika kwenotshi, imenyu yokuseta enemibala, uyilo ngokutsha Useto olukhawulezayo ... Apha siyakubonisa Iimpawu ezintsha ezikhoyo ngoku kwi-beta yesibini ye-Android P.
1 Umboniso woPhuculo lwe-Android P Izixhobo ezihambelanayo
2 Yintoni entsha kwi-Android P Beta 2
2.1 Ukuhamba ngomqondiso
2.2 Ibhetri efanelekileyo
2.3 Izenzo zesicelo
2.4 Intlalo-ntle yethu
2.5 Ukuqaqamba okuguqukayo
3 Ukujikeleza kwe-Android P: Ubukrelekrele bokwenza into yonke
Umboniso woPhuculo lwe-Android P Izixhobo ezihambelanayo
Enye yeenoveli eziphambili esizifumana kwi-beta yesibini ye-Android P, siyifumana kwinani lezixhobo ezifanelekileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, ii-betas zokuqala bezihambelana kuphela nezixhobo zeNexus kunye nePixel, kodwa enkosi kwiProjekthi iTrble, inani lezixhobo ezihambelana nale beta landisiwe ukuya kuthi ga kwi-7 yeemodeli ezintsha. Iimodeli ezikhoyo ngoku kwimarike kwaye zezi iyahambelana ne-beta yesibini ye-Android P Zizo:
Ndihlala kwiX21 UD
I-Xiaomi Mi MIX 2S
Iprojekthi iTreble ivumela abavelisi ukuba bagxile kuphela kulungelelwaniso lwamalungiselelo abo kunye nohlobo oluhambelanayo lwe-Android. Ukuhambelana nezinto ezahlukeneyo eziyinxalenye yesixhobo kuya kuba kulawulo lukaGoogle uqobo, Ngubani oza kusebenza kunye nabavelisi ngqo. Kubonakala ngathi uGoogle ekugqibeleni usifumene isitshixo ebesifuna ukuba sikwazi ukwandisa ngokukhawuleza izabelo zokwamkelwa zenguqulelo nganye entsha ye-Android eyazisa kwimarike, nangona okwangoku abavelisi bobabini abakhulu abathengisa ezona smartphones kwi imarike, i-Samsung kunye neHuawei abakhange baphawule ngalo mbandela.
Yintoni entsha kwi-Android P Beta 2
Inguqulelo entsha ye-beta ye-Android P iqinisekisa amarhe amakhulu awayevezwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, nalapho sinokubona khona ukuhamba ngomzimba kwiscreen ngendlela efanayo naleyo sinokuyifumana kwi-iPhone X, ethi yona ikhuthazwe okanye ikhutshelwe kwi-webOS, inkqubo yokusebenza yePalm okwangoku ngaphakathi kweTV.
Olu hambo ngezimbo zomzimba lusivumela ukuba singatshintshi ngokukhawuleza phakathi kwezicelo zokugqibela esizivulileyo, kodwa likwasivumela ukuba sikhawuleze ukufikelela kwimenyu yokuqalisa, ukuvala usetyenziso ... Ukwenza usebenze ngokuhamba ngomzimba kufuneka Swayipa ukusuka ezantsi ukuya phezulu kwiscreen.
Ibhetri iyaqhubeka ukuba yingxaki ephambili esijongana nayo yonke imihla nge-smartphone yethu, ngokufanayo ingxaki esele ihlupheke ngaphezulu kweminyaka elishumi kwaye ngalo mzuzu unesisombululo esinzima. Zombini i-Android kunye ne-iOS ziphucule ukusebenza kwezicelo kunye nenkqubo ngokubanzi ukuze ukusetyenziswa kuncitshiswe. I-Android Marshmallow kunye ne-Android Nougat sele zisinike inkqubela phambili enomdla kule nkalo.
Ngokumiliselwa kwe-Android P, ukusebenza kwesiphelo sethu ihambelana nokusetyenziswa kwesixhobo sethu, esivumela ukuba sinciphise ukusetyenziswa kwe-CPU kunye nokusetyenziswa ngasemva ukuya kuthi ga kwi-30%, ukuze ukusebenza kweprosesa kungafaniyo ukuba sijonga iakhawunti yethu ye-Twitter kunokuba sibukele iividiyo ku-YouTube okanye sonwabele imidlalo yethu esiyithandayo.
Ukulandela imeko yokuxelwa kwangaphambili eya kusinikwa yi-Android P, umqalisi wesicelo uya kusibonisa usetyenziso amathuba amaninzi ekufuneka siwasebenzisile ngokwexesha losuku esizifumana sikuyo. Ngale ndlela, ukuba ngelixa sitya sinomkhwa wokufunda iakhawunti yethu ye-Twitter, iya kuboniswa kuqala ngaphakathi kwesiqalisi sesicelo.
UGoogle ebesebenza ukongeza amanqaku aphambili ukusinceda ukuba sifezekise ibhalansi efunekayo phakathi kwetekhnoloji kunye nobomi bethu bemihla ngemihla. Iphaneli entsha iya kusibonisa ukuba silichitha njani ixesha nezixhobo zethuUkusetyenziswa esikwenzayo kwezicelo, inani lamaxesha esivule i-terminal, inani lezaziso esizifumeneyo imini yonke.
I-Android P idibanisa ixesha elisivumelayo setha imida yokusetyenziswa kwesicelo. Njengoko ixesha lisondela, isicelo siya kuncipha ukusikhumbuza ngeenjongo zethu. Umsebenzi we-Wind Down uya kujonga ukusikhumbuza ukuba lincinci ixesha lokugqiba usuku kwaye iyakwenza ukuba ungaphazamisi imowudi njengoko ilixesha lokulala.
Imowudi yokungaphazamisi ayizukulawula kuphela iifowuni zokuvala kunye nezaziso, kodwa nazo iya kuphelisa konke ukuphazamiseka okubonakalayo iboniswe ngelixa le ndlela ivuliwe.
Ukuqaqamba okuzenzekelayo akusoloko kusebenza njengoko kufanele kwaye inguqulelo elandelayo ye-Android ifuna ukufunda ukuyilungisa kube kanye ngokuchanekileyo, isazi ngawo onke amaxesha, sisebenzisa nini i-glitter, nokuba phantsi kwelanga elinamandla, phantsi kokukhanya okungeyonyani, esitratweni ngokukhanya okwaneleyo ... Ukuqaqamba kwescreen kuyaqhubeka nokuba yeyona nto inoxanduva xa kufikwa ekusebenziseni ibhetri, ukusetyenziswa okuya kuncitshiswa njengoko sikuxelele. ngentla.
Ukujikeleza kwe-Android P: Ubukrelekrele bokwenza into yonke
Njengoko unokuba ubonile kuninzi lweendaba ezisinika i-Android P, ubukrelekrele bokufakelwa yinxalenye ebaluleke kakhulu yenguqulo elandelayo ye-Android, kunye nokufunda komatshini. I-Android P iya kufunda ukwenza useto olwahlukileyo kwisixhobo ukuze ilawule ukusetyenziswa kwezixhobo, ukukhanya kwesikrini, ukusetyenziswa kwebhetri ngendlela ezenzekelayo ngaphandle kokuba umsebenzisi abe nexhala ngamaxesha onke ukwenza okanye ukucima imisebenzi ethile, ukwandisa ubomi bebhetri ngokukhawuleza ngokungxamisekile.
Ubukrelekrele bokwenziwa bufunyenwe kwi izindululo zesicelo, Iingcebiso zokuxhomekeka kwixesha losuku esikulo, ziya kusinika iziphumo okanye ezinye, zihlala zixhomekeke kwindlela esisisebenzisa ngayo isixhobo. Ubukrelekrele bobugcisa kunye nokufunda ngomatshini, nako izakufikelela kwezinye zeenkonzo eziphambili zikaGoogle njengeeFoto zikaGoogle, iimephu zikaGoogle, iilensi zikaGoogle ... ukongeza kwiGmail, apho inkonzo yemeyile kaGoogle izakusinika iimpendulo ezizenzekelayo ngendlela yokubhaliweyo, hayi amagama njengoko esenza ukuza kuthi ga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Iindaba eziphambili ze-Android P Beta 2
INiantic ifuna abadlali ukuguqula iiMephu zePokémon ziye kwi3D
Ikhaya leGoogle kunye neMini yasekhaya yakwaGoogle ziya kuhlala eSpain ngo-2018 wonke